दशैंको मासु राम्रोसँग पकाएर मात्रै खान चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन् । राम्रोसँग नपाकेको मासु खाएमा मासुमा भएका किटाणु जिउँदै शरीरभित्र पस्ने र मानिसलाई समस्या हुन्छ । मासु खानुअघि खसी, भेडा स्वस्थ भए नभएको यकिन गर्न पनि चिकित्सकहरूको सुझाव छ । दशैंको समयमा मासु प्रयोग अधिक हुने भएकाले यसको सेवनमा ध्यान दिन डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन् ।
दशैँसँग सम्बन्धित यी सामाग्री छुटाउनुभयो कि ?
नपकाएको खानुहुन्छ ? शरिरका विभिन्न भागमा यसरी उब्जिनेछन् यस्ता घातक परजीवी
एग मसाला रेसिपीः कति सजिलो, कति स्वादिलो
कब्जियतबाट यसरी बचौँ
धेरै पौष्टिक तत्व प्राप्त गर्नको लागि यसरी खानुहोस् अण्डा
पाइन नट्सले फाइदैफाइदा
स्वास्थ्य-जीवनशैली ‘बलात्कारी मानसिकता’ कस्तो व्यक्तिमा हुन्छ ?
यसकारण बच्चालाई स्तनपान गराउनु फाइदाजनक